Filim Soo Wajahday Plywood
Farta - Filimka Wadajirka ah ee Plywood wajahay
Anti Slip Filimku wuxuu wajahay Plywood
Dalxiis Warshad & Baakad Gaadiid
Plywood oo aan lahayn xabag?
Plywood waa waxyaabo badan oo lakab ah oo loox ah oo ka samaysan veneer laga miiqay qaybaha alwaaxda ama alwaax khafiif ah oo laga soo qorsheeyey fagaarayaasha alwaaxda isla markaana lagu dhejinayo dhejiska, waana mid ka mid ah walxaha caadiga ah ee alaabta guriga. Si kastaba ha noqotee, inta badan alwaaxda alwaax dhaqameedka waa cusbi dardaro ah a ...
Farqiga u dhexeeya plywood iyo blockboard
Xayndaab Boodhku wuxuu ka kooban yahay loox muhiim ah iyo dusha sare ee guddiga adag. Loox ka sameysan loox si aad alwaaxda uga soo jajabiso lakabka, guud ahaan iyadoo la adeegsanayo noocyo isku mid ah ama waxyaabo la mid ah noocyada. Loox ka mid ah guddiga xakamaynta content qoyaanka sharad ...
Asalka dhirta dheer
Sanadihii la soo dhaafay, Pizhou, oo ku tiirsan kheyraadka dadweynaha hodanka ah ee maxalliga ah iyo kuwa ku hareeraysan, waxay soo saartay warshad wax soo saarta, tiro beeraley ah oo ku tababbaran socodsiinta qaybinta xajmiga ayaa urursatay raasumaal, fikradaha ganacsi ayaa ka dhammaaday. Xukunka Pizhou ...
Aagga Horumarinta Dhaqaalaha, Magaalada Pizhou, Gobolka Jiangsu, Shiinaha